Wararka - Boorsooyinka lagu rakibo jeermiska aashitada hypochlorous
Boorsooyinka lagu rakibo jeermiska aashitada hypochlorous
Saameeyay COVID-19, waxaa sii kordhaya baahida loo qabo alaabada bakteeriyada disha sida jeermiska iyo aalkolada.
Laga bilaabo bilawgii sanadka 2020, omashiinada ur yihiin shaqeeya 24 saacadood kasta maalin loogu talagalay suuqa of hjeermiska ypochlorous acid iyo aalkolada.
Waxaan soo direynaa in kabadan 100000 kumbiyuutar kumbiyuutarro ah oo wata qasabado (bishiiba)) suuqa Japan ilaa sanadkii 2020. Awoodda ugu caansan waa 5 litir iyo 20 litir oo dareere ah hjeermiska ypochlorous acid iyo aalkolada. Waxaan badanaa u dirnaa KIX diyaarad, ama waxaan u dirnaa badda illaa dekedda Osaka, dekedda NAGOYA iyo TOKYO Port.
Ka sokow boorsadeena sanduuqa ku jira (sheer iyo ldpe cubitainer), waxaan jeclaan lahayn inaan soo bandhigno dhammaan badeecadaha wax lagu dubo:
1. Taxanaha SJA —- Boorsada Cubitainer ee sanduuqa ku jirta, Ldpe wax caag ah oo jilicsan, isku laaban, oo aan lahayn wax xamil ah. Cabirka caadiga ah 1L-25L.
2. Taxanaha SJB —- Weel biyo ah oo burbursan, Qalabka Ldpe, BPA oo aan bilaash aheyn, bannaanka oo inta badan lagu isticmaalo, oo leh gacmo qaadis. Cabbirka caadiga ah 5L, 10L iyo 20L.
3. Taxanaha SJC — Jeermiska lakab isku laabmi kara, Maaddada Ldpe, caag jilicsan, la qaadan karo, waara, adeegsiga bannaanka, oo leh xammuul qaadis. Waxaan nahay kuwa ugu weyn ee keena wax soo saarka noocan ah ee UNHCR. Cabirka caadiga ah 10L iyo 20L.
4. Bacda toosan ee shaashadda ku jirta sanduuqa, oo ay samaysay PA + PE muti-layers, oo ka raqiisan ldit cubitainer, shahaadada EU, miisaan khafiif ah, keydinta booska, yareynta khidmadaha maraakiibta, naqshad cusub oo ay ku jiraan godad boorso ku jira, qaabka kuubku wuxuu ku habboon yahay sanduuqa si fiican , waara oo ku filan, waxay leeyihiin qalab / qalab kala duwan. Cabbirka caadiga 5L, 10L, 18L, 20L.
Waxaan nahay warshad leh 10 sano oo khibrad soo saar ah. Bacaha noocan ah waxaan ku iibinaynay Alibaba muddo 9 sano ah. Macaamiil ''Baahida iyo soo-jeedintu waa awoodda aan wadno, qanacsanaanta macaamiisha waa noo baacsasho. Waxaan nahay hadda raadinaya u gudbiyo wadashaqeyn ballaaran oo lala yeesho macaamiisha dibedda ku saleysan faa'iidooyinka wadaagga ah.
Waxaan si adag u aaminsanahay in dadka aduunku ay ka adkaan doonaan COVID-19 mustaqbalka dhow.